Yemahara Data Widget yenguva shoma IPhone nhau
Iyo yekuzivisa nzvimbo ndiyo nzvimbo yakasarudzwa neApple kwete chete kuratidza zvese zviziviso, asi zvakare zvinobatsira kwazvo kusanganisira akasiyana majeti anotibvumidza kuti tiwane ruzivo nekukurumidza yemashandisirwo akasiyana atakaisa pane yedu iPhone, iPad kana iPod touch. Kuburikidza nemajeti akasiyana, isu tinogona kuziva nguva dzese kunova musangano unotevera pane yedu ajenda, ndeapi mabasa atakamirira kuita, panotepfenyurwa nhepfenyuro yedu, mamiriro ekunze uye fungidziro yayo, kukosha kwemusika wemasheya ... Kutenda kuWedget Widget, yatatotaura kwauri kwauri pane dzimwe nguva, isu tinogona zvakare kuziva chero nguva, iko kudyiwa kwedu data rate.
Yedu data rate chimwe chinhu kunze kwekunze kwakasarudzika, isu tinowanzo chengeta segoridhe mumachira, nekuti kana zvasvika kumagumo, isu tinotemerwa, chero bedzi mupi wedu asingacheke kubatana mubhu uye inotibvumidza kuenderera nekubatana neinternet kunyangwe pazasi kumhanya. Vashandisi vakasiyana vanopa chishandiso kuburikidza chatino gona kuziva nguva dzese iko kushandiswa kwedata reyero yedu, iko kunwa uko kunogadziridzwa kusvika pakakwirira, sezvo vari ivo vanozvipa kwatiri, asi zvinotimanikidza kuwana online nechikumbiro chavo, maitiro anogona kutitorera zvishoma kudarika miniti.
Nekudaro, neData Widget, isu tinogona kuziva nekukasira ipapo, mangani MB atakadya chiyero chedu uye kuti tasiya mangani, kuti titange kuita zvirambidzo kana zvichidikanwa. Izvo zvinotibvumidzawo isu kumisikidza yambiro kana tasvika pane imwe nhamba, kutanga kusimudza tsoka yekumhanyisa kana tichida kuzokwanisa kusvika kupera kwemwedzi nedata mune yedu nharembozha. Ndanga ndichiiyedza kwemwedzi yakati wandei uye ndinogona kuzvisimbisa zviverengero zvarinoratidza zvinoenderana chaizvo nezviri kuitika, saka chikumbiro chinokurudzirwa kuziviswa nguva dzese nezve chiyero chedu.
Dhata Widget - 3g / 4g / 5g dhata2,29 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Data Widget yemahara kwenguva shoma
Iyi yakanaka sei Anwendung! Ndanga ndichiishandisa kwenguva yakareba uye ndazvienzanisa nevamwe vazhinji uye kwandiri, izvi hazvifananidzwe!
Zvakaipa ini handina kuzviwana mahara!
Naiye mugadziri haasi
Haisi yemahara ...
Iwe une sarudzo yekusabvisa maapplication? Mune rondedzero zvinoita kwandiri kuti hazvifungi nezvayo uye ini ndine mamwe masocial network masisitimu andinofungidzira kuti angangopindawo MB kuverenga, handiti?